Njengoba lwaqalwa ngo-1920 yaphela iminyaka engamashumi amathathu kuphela kamuva, repressions kukaStalin beniyingxenye Iosifa Vissarionovicha kanye nabasizi bakhe inqubomgomo eside futhi kunenjongo. Okuqondiwe abo ayengamakhulu nezitha wamanje ngesikhathi namandla.
Igama elithi "ezingabekwa zokucindezelwa kwalabo bantu" enguqulweni ezisusela olimini lwesiLatin kusho ukucindezelwa, isijeziso isicelo ngumbuso kanye uhulumeni.
Phakathi nokubusa Iosifa Vissarionovicha repressions eyenziwa ngenkuthalo, kungakhathaliseki ukuthi benzani futhi bakamalalahlengezela. Ziyini izimbangela isijeziso esetshenziswa eU.SSR? repressions kukaStalin Kwakuseshwa ngokuhambisana articles Criminal Code sisebenza ngaleso sikhathi. Nazi ezinye amagama abo; luvalo, bayavukela lobunhloli, amaphekula ngenhloso, ukuketula, ukuketula, esiphikisayo wamavukelambuso ukuketula (ngoba enqaba ukusebenza ekamu, ngokuba abaleke esikhungweni avelelwe), ukubamba iqhaza kulolo zungu, amaqembu emelene ngempela namaSoviet futhi izinhlangano ezikhankasela emelene nohulumeni, amambuka umndeni, politbanditizm nokuvukela. Nokho, ukuqonda okushiwo kulezi zihloko kumele kube ajwayelekile kakhulu ngokuhlala nabo.
Ziyini izimbangela wemikhankaso kaStalin yokucindezela?
Impikiswano ngale ndaba kwenziwe kuze kube yilolu suku. Ezinye izazi-mlando zikholelwa ukuthi ezingabekwa zokucindezelwa kwalabo bantu yasekuqaleni wajaha zinenjongo eyodwa vó - ukuqedwa betembusave ka Iosifa Vissarionovicha. Abanye bakholelwa ukuthi bangabafokazi eyodwa yezindlela ngokuzama ukusabisa, ukucindezelwa abantu baseSoviet, yokuqinisa uhulumeni wamanje. Futhi abanye ngisho ukubeka phambili inguqulo kunalokho ezingabazisayo ukuthi eSoviet Union kwaba khulula ukwakha imigwaqo nemisele kwakudingeka zabasebenzi. Kukhona umbono lapho ebheka khona ukuthi anti-lwamaSemite ezingabekwa zokucindezelwa kwalabo bantu uStalin waphishekela imigomo.
Owaqala mass iziboshwa?
Naphezu kweqiniso lokuthi e kwamaSoviet, lesimbi main yokucindezelwa kubhekwe abakhulu Stalin: N. Yezhov futhi Beria (Commissioner of Wezangaphakathi), elisolwa alethwe (uNobhala Gene uMnyango KaHulumeni Wezokuphepha.) Inhloko yezwe ulwazi olungalungile, izazi-mlando eziningi phikisana ukuthi yokucindezelwa - nomsebenzi wezandla Iosifa kuphela Vissarionovicha. Wanikeza ukwaziswa okunokwethenjelwa futhi efakazelwe mayelana iziboshwa zesikhathi esizayo.
Kusukela ngo-1930 iSoviet Union wadala uhlelo kwamakamu iziboshwa Gulag, ezazihlanganisa zokuhlala ezikhethekile (eyenzelwe abantu wathumela isixhumanisi), Colony (ngokufaka okungenani iminyaka emithathu), amakamu (ngoba iziboshwa abamukele impela isikhathi eside). Ngemva kwesikhashana wawuhlanganisiwe Bureau of ohlelweni of lokuqondisa izigwegwe. Benza iziboshwa, abagwetshwa izigwebo ophoqelelwe ngaphandle ejele.
zomlando Declassified kuyaziwa ukuthi isibalo izenzo counterrevolutionary wagwetshwa Ijele for 1954 bezingaphansi abantu 3.777.380, kuyilapho isilinganiso eliphakeme wathola iziboshwa 642.980. Phakathi nenkathi yokucindezelwa, kwashona ezingaphezu kuka-1.5 million balahlwa amacala zezombusazwe kanye nomthetho wezobugebengu.
Bambalwa izisulu zezinhlekelele repressions kukaStalin avuselelwa ngesikhathi impilo uMholi, abaningi baye bakwazi ukwenza kanjalo nje ngemva kokufa kwakhe. Kuqondiswe ukuboshwa umuntu (Beria, Yezhov, Yagoda et al.) Ingabe kamuva yicala ngokwabo. Ngesikhathi yokwakha kabusha nangemuva Soviet sikhathi, cishe kuzo zonke izisulu yokucindezelwa abangu avuselelwa, ngaphandle salabo abanomthwalo wemfanelo wokwenza mass ukuboshwa. States ukusebenzisa isinxephezelo imali ukufelwa ukubaluleka impahla ngesikhathi "abaphucwa", aphethwe eminyakeni engu-30 ngesikhathi collectivization ophoqelelwe.
Kufanele uqaphele lokhu umlando olunzima lwesikhathi esidlule bese uzama ukwenza konke ukuqinisekisa ukuthi esikhathini esizayo akukho okusikhumbuza kwesikhathi abantu baseSoviet, okungase ngamafuphi ngokufingqiwe ngamagama amabili: "UStalin wathambisa isandla. Ingcindezelo. "
Kolchak (Admiral): Biography emfushane. Amaqiniso ethakazelisayo evela ukuphila Admiral Kolchak
Boris Godunov: Biography emfushane. inqubomgomo basekhaya nabamazwe angaphandle Borisa Godunova
Marshal we Russian Federation: kuphela izinkanyezi ngenhla
Ukuqedwa serfdom eRussia
Romanov lwamakhosi. Itshwayo izingalo Romanovs (B. V Kene)
Russian isimo umngcele
Kuyini izinga lokushisa elilungile esiqandisini?
Phinda yokubhalisa ezindlini - igxathu negxathu Umhlahlandlela
Bakelite varnishes: Ukucaciswa, isakhiwo, izici kanye nokubuyekeza isicelo
Step by step zokupheka baking okusheshayo
Funda indlela yokwenza insipho Bubbles ezimweni ikhaya
Ukuphendula kungukuphindaphindiwe: iseli kusuka kuseli
Kanjani ukuze ahlangane ikhayithi kulokho iyatholakala?
Ihhotela Muine Ocean Resort & Spa 3 * (Phan Thiet, Vietnam): incazelo kanye nezithombe